MSF oo Daaweysey Dad ku Dhaawacmay Falalka Amaan darada ee Koonfurta Gaalkacyo - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
Dhakhaatiirta an xuduuda laheyn ee MSF ayaa Cusbitaalka Koonfurta Galkacyo ku qaabilay 13 qof oo dhaawacyo rasaas ah ay soo gaareen ka dib markii aroornimadii arabacadii 8da Jun 2011 rasaas lagu furay dad ku sugnaa meel shah lagu cabo.
2 ka mid ah dadkii isbitaalka la keenay oo lahaa dhaawac halis ah una baahnaa qaliin degdeg ah ayaa waxaa kaxeeyay qoysaskooda si ay u helaan daaweyn gaar ah oo wax katari karta xaaldooda daran.
11 ka kale oo ay soo gaareen dhaawacyo fudud iyo lafo jajabay ayaa dhamaan waxaa lagu daaweyay cusbitaalka Koonfurta magaalda Galkacyo.
4 qof ayaa geeriyooday ka hor inta aysan soo gaarin cusbitaalka dhamaantood waxa ay ahaayeen dad rayid ah.
Shaqaalaha MSF ee isbitaalka Koonfurta Galkacyo waxaa ay bixiyaan daweyn oo loogu talagalay in la siiyo dadka xaaladoodu ay khtar tahay, adeega dhalaanka iyo hooyooyinka, quudin, daweynta qaaxada iyo qaliin. Isbitaalkan ayaa dadka deeganka waxaa ay ka helaan qaliin kali ee lacag laánta ah iyadoo ay bukaanka ka yimaadaan ilaa Itoobiya si ay u helaan daweyn. Sanadkii 2010ka ayaa waxaa adeeg caafimaad ka helay isbitaalka ilaa 45,000 oo qof.
MSF waa haya’d madax banaan oo bixisa gaargaar caafimaad iyo mid biniaadnimo oo mashruucyo ku leh 8 gobol oo ku yaala koonfurt aiyo bartamaha Soomaaliya. In ka badan 1,400 oo shaqaala Soomaali ah oo ay cawiyaan 100 kaloo ku sugan Nairobi, ayaa bixiya adeega guud ee caafimaad, daweynta macluusha iyo nafaqa darad iyo taageerida dadka dalka gudahiisa ku barakacay. MSF waxey sidoo kale bixisaa adeeg qaliin ah iyo biyo dhaamin iyo qeybinta raashinka oo ay k abixisa goobaha ay abaaruhu saameeyeen. MSF wax deeq ah oo dowladaha ka socda ma ogolaato marka ay fulineyso mashruucyada Soomaaliya. Dhamaan deeqaheeda waxey ka heshaa tabaruc gaar ah.
Tags: MSF, South Galcayo Hospital
Qoraalada kale ee ku saabsan Mudug, South Central Somalia